Soomaalaay shuushku ha baxee shakiga jira aan ka showrno. | Laashin iyo Hal-abuur
Soomaalaay shuushku ha baxee shakiga jira aan ka showrno.
Duul wada dhashay oo ehel iyo qaraaba ah … xigto sokeeye iyo ilma adeer walaal ah … ilmo abti iyo ilmo habreed intuba isu wada ah … Seeddi iyo dumaashi, soddog iyo soddoh wada xidid wadaag ah, haddana kala shakisan oon is aamineyn oo dakane isu wada qaba, weliba u sii diyaara dhiig daadin dano gaara huwan iyo aarsi qabyaaladeed soomaalaay innaga un baa leynaga arkaaye miyuusan caqligeennu shaqeyneyn?, waxa dhacayaahi sow kugu dhimayoo kaa dhimay un maaha?.
Uumiyaha kale ee dunida ku nool miyeynu ka fikir liidannaa?. Ma cid caqliga si gaar ah loo siiyay baa jirta, mise dadaal baa leysku dhaafay?. Maxaa soomaalaay adiga ilbaxnimo kuu diiday? Sow aadmigu sagaal kuma wada dhalan?, maxaa xurmada kaa qaaday? ” is fahmi weynaye, aan is fahamno oo shakiga jira aan ka showrno, maxaa xal inoo ah?”.
Haaddii uu Soomaalaay beri daad soo rogmaday dareen kaaga wax u dhimay waa masiibo rabbaani ah oo duufaantaasi cid waliba wey ku habsatay waana dhibaato 25 jirsatay oo nagu wada dhacday, isla markaana saameyn ku yeelatay dalka, dadka iyo diintaba, taasina iney cidi cid kale ku eeddo maaha, dib ha eegin walaal ee horay u sii soco, xalku wuxuu ku jiraa wada hadal daacad laga yahay iyo heshiis aan laga daba keeneynin (looma dhamma) ”runtii soomaalaay is fahmi weynaye, aan is fahamno oo shakiga jira aan ka showrno, si aan shisheeye uga maaranno!”.
Dowladnimo haddaan loo tafa xeydan waa tacab khasaar… Tiirka taagan haddaan tiirar kale lagu lamaanin waa tacab khasaar , weligaaba meel cidla ah taagnow waa tacab khasaar, dalkaaga hooyo tacbaan ku ahow waa tacab khasaar, tacliin iyo tayo la’aan qurbaha u tubnow waa tacab khasaar, ee soomaalaay aayahaaga ka tasho. Runtii is fahmi weynaye aan is fahamno, shakiga jirana aan ka showrno.
Mid hadduu mid dal dhisaayo
Midna uu sii duminaayo,
Mid hadduu maslax doon yahay,
Midna uu dulmilow yahay,
Mid hadduu wax daweynaayo
Midna uu wax un dilaayo,
Deggani lama gaarayee
Aan u doodno qarannimo
Midnimaa duggaashi lehe
Danta guud aan u istaagno
Dayra maaha dhulkeennee
Nacabka aan ka difaacno
Daah ma saarin taladuye
Inta u damqataay kaca oo
U daneeya dalka hooyo.